မလိုအပ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် Lux skin ရဲ့ hair remover – YANGON STYLE
မလိုအပ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် Lux skin ရဲ့ hair remover
အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကြားမှာ ခြေမွှေး၊ လက်မွှေးရှည်တာတွေက ပြဿနာပါနော်။ တစ်ချို့ကတော့ ပုံမှန် waxလုပ်ကြ၊ ဆိုင်ကို သွားပြီ:လုပ်ကြတာပေါ့။ တစ်ချို့ကလည်း အရှင်းပျောက်တယ်၊ တစ်ချို့ကလည်း အရှင်းမပျောက်ဘူး။ တစ်ချို့ကလည်း အမွှေးကြမ်းတွေ ပိုထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေကြားရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ တော်တော်လေးကို လူပြောများပြီး သုံးကြည့်ဖို့ အကြံပေးကြတဲ့
Lux skin ရဲ့ IPL laser hair removal လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။
သူက အိမ်မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်လို့ Aesthetic Clinic တွေက Laser Hair Removal treatment တွေနဲ့တော့ result ကွာနိုင်ပေမယ့် ပုံမှန်သုံးသွားရင်တော့ ရေရှည်မှာ သိသာတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။
Clinical Grade Technology ဖြစ်ပြီး Home Use အတွက် စိတ်ချရပြီး ထိရောက်ပါတယ်လို့ တရား၀င်ကြေငြာထားပြီးသားပါ။
Underarm/Bikini Lines/ခြေသလုံးမွှေး အပြင် အခြား ဘယ် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မဆို သုံးလို့ရတယ်!
Laser ပစ်တာဆိုပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အားက အောက်ခြေအလွာလောက်ထိပဲ သွားတာမို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး!
Non-invasive ဖြစ်ပြီး intensity ကို up to level5အထိအတိုးအလျော့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို ၁ ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ၁၂ ပတ်အကြာမှာ သိသာတဲ့ result ရစေပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ၃ပတ်ကြာတာနဲ့ သိသာပြီး တစ်ချို့ကတော့ ၆ပတ်ကြာတဲ့အခါ သိသာပါတယ်။
သူက အလင်းတန်းနဲ့ အမွှေးတွေရဲ့ အမြစ်ကို ပစ်ပြီး အရှည်နှေးအောင်ရယ်၊ သုံးတဲ့အကြိမ်အရေအတွက် များလာရင် နောက်ဆုံး လုံးဝ မပေါက်တော့အောင်ထိ ကုသပေးပါတယ်!
Oil တစ်ခုခုလိမ်းပြီး ရဲ့ IPL laser hair removal ရဲ့ ခလုတ်ကလေးကို နှိပ်ပြီး ပစ်ရုံပါပဲ။
ဒါလေးကြောင့် Waxing တွေလုပ်လိုက်၊နုတ်လိုက်၊ပြန်ရှည်လာလိုက် မဖြစ်တော့ဘူး!
ဆိုင်တွေမှာ သွားလုပ်သလိူတခါလုပ် ၃,၄သောင်းလည်းမကုန်တော့ဘူး စရိတ်တော်တော်လေးသက်သာသလို အချိန်လည်းမကုန် လူလည်းမပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်
အားသွင်းကြိုးတန်းလန်းသုံးရတာလေး တစ်ခုပဲအားနည်းချက်ရှိတာကလွဲလို့ မလိုချင်တဲ့အမွှေးအမျှင်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ IPL Laser Device(For Home Use) လေးပါပဲ။
မူရင်းစျေးက ၂သိန်းခွဲ ပတ်ခြာလည်ပါ။ အခုတော့ စျေးချနေတာတွေရှိလို့ ၉သောင်းပတ်ခြာလည်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အွန်လိုင်းရှောပင်တော်တော်များများမှာလည်း ၀ယ်ယူလို့ရနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ။